बाढीले आफ्नो १० करोडको सम्पति बगाएपछि गहभरी आशु पर्दै एक वृद्द ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
June 17, 2021 AdminLeaveaComment on बाढीले आफ्नो १० करोडको सम्पति बगाएपछि गहभरी आशु पर्दै एक वृद्द ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
वर्षाका कारण आएको बाढीले गर्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा कार्यरत आठ जना सम्पर्क विहीन भएका छन् । तीन चिनियाँ, तीन भारतीय र दुई नेपालीसहित आठ कामदार बेपत्ता भएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीयबासीको सहयोगमा उनीहरुको खोजी भइरहेको छ ।
त्यस्तै मेलम्चीमा बाढीमा चिनिया र भारतीय नागरिक सहित २० जना बेपत्ता भएका छन् । बेपत्ता हुनेमा तीन भारतीय र तीन चिनियाँ नागरिकसमेत रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । निर्माणस्थलमा रहेका ७६ जनालाई हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी काठमाडौँ र धुलिखेल ल्याइएको आयोजनाले जनाएको छ । उद्धार भएका सबैको अवस्था अहिले सामान्य छ ।
बाढीले आफ्नो १० करोडको सम्पति गएपछि एक वृद्द भावुक हुदै मिडियामा आफ्नो दुखेसो यसरी पोख्छन । भिडियो हेर्नुहोस :